Ogaden News Agency (ONA) – Gudoomiyaha JWXO oo u Mahadnaqay Xubnihii Uga Qaybgalay Dhagaysigii Brussels
Gudoomiyaha JWXO oo u Mahadnaqay Xubnihii Uga Qaybgalay Dhagaysigii Brussels
Waxaa shalay shirkoodii caadiga ahaa ku kulmay Guddiga Fulinta ee JWXO. Shirkan oo uu Gudoomiyaha Ururka kala soo qaybgalay ayaa lagu falanqeeyay arima muhiim ah oo quseeya halganka shacabka shacabka S.Ogadenya.
Xogwareysi dheer oo xubnaha ay is-weydaarsadeen ka dib, Gudoomiyaha JWXO Adm. Maxamad C. Cismaan ayaa xubnaha GF uga warbixiyay xaaladda uu ku sugan yahay halganka ka socda gudaha Ogadenya isagoo xidhiidho lawada sameeyay qaybaha CWXO iyo qar ka mid ah bulshada Ogadenya oo meela kala duwan ku sugan. Wuxuu Gudoomiyaha ka warbixiyay in guud ahaan halganka uu meel fiican marayo. Sidoo kale in N/hurayaasha CWXO ay guula badan kasoo hooyeen weeraradii ugu dambeeyay ee cadawga ay ku qaadeen.
Wuxuu Gudoomiyaha ka xogwaramay dagaalkii uu ku shihiiday Ilaahay Haka Aqbalo Shihiidnimadii uu Niyaystaye mudane Mustafe Haybe, oo uu sheegay inuu ku dhintay geeri sharaf leh oo ah midda uu qofkasta oo ka mid JWXO uu rajaynayo. Faahfaahinta dagaalka iyo sidoo u dhacay ayuu gudoomiyuhu ka warbixiyay.
Wuxuu Gudoomiyaha JWXO uga tacsiyeeyay dhamaan umadda Somaliyeed ee Ogadenya, N/hurayaasha CWXO iyo dhamaan Xubanaha JWXO, Isagoo Ilaahay uga baryay inuu ka aqblao Shahiidnimo AUN mudane Mustafe Haybe. Inaa Lilaalhi Wa-Inaa Ilayhi Raajicuun. Wuxuu Gudoomiyaha xasuusiyay umadda Ogadenya in Geedka Gobanimadu uu ku boxo dhiiga halayayga.
Ka dib, wuxuu Gudoomiyaha JWXO si aad ah ugu mahadnaqay xubnihii ka socday shacabka Somaliyeed ee Ogadenya ee ka qaybgalay Shirkii dhagaysiga ahaa ee lagu qabtay Barlamaanka Yurub ee Brussels. Wuxuu si gaar ah bogaadin ugu diray xubnihii soo diyaariyay dhagaysiga ee HAD uu ugu horeeyo iyo mudanayaashii khudabada ka jeediyay ee usoo bandhigay baarklamaanka Yurub dhibaatada uu ciidanka Itobiya ku hayo shacabka Somaliyeed ee Ogadenya gaar ahaan Haweenka oo ciidanka Itobiya uu si gaar ah ugu xadgubo xuquuqdooda.
Dhagaysigii warbxixintii Gudoomiyaha ka dib; waxaa laguda galay ajendihii Shirka oo ka koobnaa qodobo badan oo muhiim u ah geedi socodka halganka shacabka Somaliyeed ee Ogadenya. Qodobada sida aadka ah loo falanqeeyay waxaa ka mid ah sidii loo xoojin lahaa Is-kaashiga JWXO iyo mucaaradka kasoo horjeeda xukunka TPLF. Qodobkan waxaa si qota dheer uga hadlay Mudane Xassan Macallin oo u qaabilsan ururka arimaha la xidhiidha mucaaradka Itobiya. Wuxuu mudane Xassan Macallin la wadaagay xubnaha GF xaaladda ka jirta Itobiya, doorashada la sheegayo inay ka dhici doonto Itobiya iyo sida ay mucaaradka Itobiya u arkaan doorashadaa iyo waxa laga filayo.
Shirka GF oo socday afar saacadood ayaa lagu go’aansaday qodobo hawl-fulineed oo loogu talagalay in kor loogu qaado halganka gudaha iyo dibadaba ka socda.